Miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana, mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny maha-azo antoka kokoa, fitsitsiana angovo bebe kokoa, mampihena ny tabataba, ary mampihena ny fandefasana entona mandoto, amin'ny fizotran'ny fitsaboana ambonin'ny tany, ny plating vakum dia nanjary fironana vaovao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana..Tsy toy ny electroplating mahazatra, malefaka kokoa amin'ny tontolo iainana ny electroplating banga. Mandritra izany fotoana izany, ny electroplating banga dia mety hiteraka vokatra mainty miaraka amina gloss tsara izay tsy tantin'ny electroplating tsotra..
Ny electroplating vacuum dia zava-mitranga matetika amin'ny fametrahana vatana, izay entina ampidirina vaksinina ny entona argon, ary ny entona gas dia mamely ny fitaovana kendrena, ary ireo molekiola misaraka amin'ny lasibatra kendrena dia voadonan'ny entana entina mandrafitra ny sosona amboniny sy malefaka.. Amin'ity fizotran'ny electroplating ity, ny fitaovana kendrena dia tena zava-dehibe, koa inona ny fampiharana ny fitaovana kendrena amin'ny fizotran'ny electroplating vacuum??ankehitriny, hanome anao fampidirana amin'ny antsipiriany ny tonian-dahatsoratra.
Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny fampiharana ireo fitaovana kendrena amin'ny electroplating tsy misy dikany dia manana ireto toetra manaraka ireto:
(1) metaly, ny alloys na insulator dia azo amboarina ho fitaovana sarimihetsika manify.
(2) Amin'ny toe-javatra mety, horonantsary manify mitovy firafitra azo atao avy amin'ny kendrena maro sy sarotra.
(3) Amin'ny alàlan'ny fampidirana oksizenina na gazy mavitrika hafa ao amin'ny atmosfera fanesorana, ny fangaro na ny fitambaran'ny fitaovana kendrena ary ny molekiola molekiola dia azo atao.
(4) Ny fe-potoana fampidirana kendrena sy ny fotoana fampidinana dia azo fehezina, ary mora ny mahazo ny hatevin'ny sarimihetsika avo lenta.
(5) Raha ampitahaina amin'ireo dingana hafa, mora kokoa amin'ny famokarana sarimihetsika fanamiana amin'ny faritra midadasika.
(6) Ireo sombin-tsemboka dia saika tsy voakasiky ny hery misintona, ary ny toeran'ny lasibatra sy ny substrate dia azo alamina malalaka.
(7) Ny tanjaka adhesion eo anelanelan'ny substrate sy ny sarimihetsika dia mihoatra ny 10 fotoana mitovy amin'ny sarimihetsika fametrahana setroka ankapobeny, ary satria mitondra angovo mahery ireo sombintsombiny sputtered, hanohy ny fiparitahan'izy ireo amin'ny sarimihetsika miorina ambony izy ireo mba hahazoana sarimihetsika mafy sy matevina. Mandritra izany fotoana izany, ny angovo avo lenta dia mahatonga ilay substrate mila ny sarimihetsika crystallized azo alaina amin'ny mari-pana ambany kokoa.
(8) Ny hakitroky ny lozisialy avo lenta amin'ny dingana voalohany amin'ny fananganana sarimihetsika, izay afaka mamokatra horonantsary mitohy somary manify ambany 10nm.
(9) Ny fitaovana kendrena dia manana fiainana lava ary afaka vokarina mandeha ho azy sy maharitra mandritra ny fotoana maharitra.
(10) Ny fitaovana kendrena dia azo atao endrika isan-karazany, miaraka amin'ny famolavolana manokana ny masinina ho an'ny fifehezana sy fahombiazana tsara kokoa.
Ny etsy ambony dia ny famintinana ny editor ho an'ny rehetra. Ny toetra mampiavaka ny fampiharana ireo fitaovana kendrena amin'ny electroplating banga. Amin'ny maha vokatra teknolojia vaovao azy, ny fisehoan'ny fitaovana kendrena dia fandrosoana lehibe amin'ny teknolojia fitsaboana ambonin'ny tany..
Précédent: Ny tombony amin'ny tanjona kendrena mikraoba sy planar
Manaraka: Ny fampiroboroboana ny indostria kendrena manadio aluminium avo lenta